Ministirri dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaa dowwachuuf - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaa dowwachuuf
Ministirri dhimma alaa Ameerikaa Reeksi Tiilarsan waa'ee mormii waggootaaf gaggeefamaa jiruufi siyaasa biyyatti ilaalchisuun oggantoota Itoophiyaa waliin ni mari'atu jedhamee eegama.
Daawwannaan kun dhimmoota haala Itoophiyaan yeroo ammaa keessa jirtuufi hariiroo biyyoota lamaan gidduu jirurratti mariyachuuf har'a Itoophiyaa daawwatu.
Mormii waggoota sadii oliif tureefi hojii gadi dhiisuu muummicha ministiraa Hayilrmaariyaam Dassaaleny waliin walqabatee yeroo kunis yero Itoophiyaan rakkoo siyaasaa hamaa keessa jirtudha.
Akka ibsa Anga'oonni Ameerikaatti, Tillerson aanga'oota Itoophiyaa waliin waa'ee adeemsa siyaasaafi mormii biyyattii keessatti taasifamaa jirurratti ni mari'atu. Turtii daawwannaa Itoophiyaa kanaanis, Tillerson gaggeeessitoota Gamtaa Afirikaa waliin dhimma walitti bu'insa Rippabilika Dimokiraatawa Koongoo, Sumaaliyaafi Sudaan Kibbaa irrattis ni dubbatu jedhamee eegama.
Akka anga'oonni US jedhanitti daawwannaan kun Ameerikan jijjiirama hawwataa ardiin Afirikaa galmeessisaa jirtu keessatti akka qooda qabaattu gargaara. Daawwannaa kanaan biyyoota duula farra shorokkeesssummaafi naannicha keessatti tasgabbiin akka jiraatu gargaaruu keessatti biyyoota waliin hariiroo qabaachuun barbaachisaadha jedhan Keeniyaa, Naayijeeriyaafi Jibutiille ni daawwatu.
Akka anga'oonni jedhanitti, walitti dhufeenyi kun ardii kanarratti dhiibbaa Chaayinaan dolaara biliyoona hedduu baasii gochuun hojii bu'uuraalee misoomaa keessatti qabaachaa jirtu morkachuuf.
Ardii Afirikaa daawwachuun Tillerson, daawwannaa aanga'waan Raashiyaa gita isaan jiran Sergay Lavrov torbeedhuma kana Angoolaa, Itoophiyaa, Mozaambikii, Namibiyaafi Zimbaabuwee daawwachuuf jiran waliin walirra bu'e.